Ukunqoba kwe-TCC Africa ne-AfricArXiv e-ASAPbio Sprint - AfricArXiv
Kushicilelwe ngu TCC Africa & AfricArXiv on I-4th NgoDisemba 2020 I-4th NgoDisemba 2020
Ngaphansi kwesihloko Ukukhuthaza Ukulungiswa Nokubuyekezwa Kwangaphambi Kokuphrinta, I-ASAPbio ibambe i-design sprint yokwandisa ukuvezwa kwemibono emisha nesivele ikhona yokukhuthaza ukusikwa nokubuyekezwa kwangaphambi kokuprinta. Umcimbi ububanjelwe ngokubambisana no Wenza kahle, lo IChan Zuckerberg Initiative, I-Howard Medical Medical Institute, UDORA, EMBO Cindezela, I-PLOS, Futhi eLife.
I-TCC Africa ngokubambisana ne-AfricArXiv ithumele isiphakamiso ngokuhlanganyela ku Ukwakha amandla okubuyekezwa kontanga nokubekwa phambili e-Afrika. Siyajabula ukwaba ukuthi siwine izigaba ezimbili ku-ASAPbio sprint yaleli sonto:
Sihalalisela bonke abaklonyelisiwe #PreprintSprint!
Okuhamba phambili embukisweni: Ukuguqula ukubuyekezwa kontanga ngokusebenzisa ukululekwa nokubandakanya umphakathi, @Ukhozi_fm
Ukwandisa ukumelwa: Ukwakhiwa komthamo wokubuyekezwa kontanga nokutholwa ngaphambi kwesikhathi e-Afrika, @mafa_bavuma & @NomzamoMbatha
- ASAPbio (@ASAPbio_) December 3, 2020
Ukuncintisana nokuxhumana ku-ASAPbio #PreprintSprint kusinike ithuba lokwabelana ne-Global North ukuthi yimiphi imizamo eyenziwayo ukuxhasa abacwaningi base-Afrika kwinqubo yokushicilela kwezemfundo, ngaleyo ndlela kuvuleke indlela yokubambisana kwamasu ekubuyekezweni kontanga nasezinqubweni zangaphambi kokuprintwa.
UJoy Owango, Umqondisi Omkhulu ku-TCC Africa kanye nelungu leBhodi Elilulekayo le-AfricArXiv
Sibonga i-ASAPbio, abahleli bayo, nejaji kanye nabahlanganyeli ngalo mklomelo nokuqashelwa. Futhi kubo bonke abavote futhi basisekela, ngiyabonga!
Ekugcineni kubo bonke abanye abaklonyelisiwe nabethuli - sihalalisela! Silangazelele ukusebenzisana nezinhlelo eziningi ezethulwe.
Isethulo esabanjelwa e-ASAPbio Sprint ngoDisemba 3, 2020
Ukwakha amandla okubuyekezwa kontanga nokubekwa phambili e-Afrika
E-Afrika, bambalwa kuphela ababambiqhaza abakhona abanamandla nobubanzi be-pan-Afrika yokufundisa nokwakha amandla ngamathuba nangokusetshenziswa kokusebenza kokushicilela kocwaningo okukhona esifundeni okutholakalayo namuhla. Abaphenyi base-Afrika bavame ukubhekana nemali ephansi nezimfuno eziphakeme zokufundisa, yingakho kunzima ukuthi basebenze njengabahlaziyi ekuhloleni imisebenzi yabanye abacwaningi. Ngakho-ke sidinga ukusungula isiko futhi okusobala futhi okulula ukulandela ukuhamba komsebenzi okuzuzisa omunye nomunye hhayi kuphela kumamukeli wokubuyekezwa kontanga, kepha nakumbuyekezi.
I-ASAPbio (Ukusheshisa Isayensi Nokushicilelwa ku-biology) iyinhlangano engenzi nzuzo eqhutshwa ososayensi esebenza ukubhekana nale nkinga ngokukhuthaza ukuqamba kanye nokwenza izinto obala ekuxhumaneni kwesayensi yezempilo.
Isikhungo Sokuqeqesha Kwezokuxhumana (i-TCC Africa), yisikhungo sokuqala sokuqeqesha esizinze e-Afrika ukufundisa amakhono okuxhumana asebenzayo kososayensi. I-TCC Africa iyinhlangano enqoba iTrust, esungulwe njengenhlangano engenzi nzuzo ngo-2006 futhi ibhaliswe eKenya.
Categories:	izimemezeloUkwakhiwa kwamakhonoUkubambisanaBhekisiswa ontangaIsandulelo
Olabode E. Omotoso	· 4 Disemba 2020 ngo-5: 09 pm
Siyabahalalisela kakhulu i-TCC Africa ne-AfricArXiv… Siyabonga ngomsebenzi omuhle eniwenzayo e-Afrika
Jabulela ukufeza okukhulu!
Obanda	· 4 Disemba 2020 ngo-8: 08 pm
Halala futhi wenze kahle kwi-AfricArXiv ne-TCC Africa!
I-TCC Africa kanye ne-Eider Africa Basebenzisana Nabacwaningi Ekufundiseni Abasaqala Umsebenzi abavela eSub Sahara Africa - AfricArXiv	· 7 Meyi 2021 ngo-5: 12 ntambama
[…] Ukunqoba kwe-TCC Africa ne-AfricArXiv e-ASAPbio Sprint […]